I-2019 Iinkcukacha-manani zokuThengisa | Martech Zone
I-2019 Statistics yokuThengisa
NgoMvulo, Septemba 30, 2019 NgoMvulo, Septemba 30, 2019 UJosh Wardini
Ukufumana isixhobo esikhuthazayo esifanelekileyo esingafikeleli kuphela kubaphulaphuli kodwa esenza unxibelelwano nababukeli kuyinto enzima. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, abathengisi bebegxile kulo mba, kuvavanywa kwaye kutyalomali kwiindlela ezahlukeneyo ukubona ukuba yeyiphi esebenza kakuhle. Kwaye ayothusi mntu, umxholo wentengiso ubambe indawo yokuqala kwihlabathi lentengiso.
Uninzi lucinga ukuba ukuthengisa umxholo bekukho kule minyaka imbalwa idlulileyo okoko i-intanethi yaduma kwihlabathi liphela ngokuququzelela ukurhweba okukhawulezayo kolwazi.
Nangona kunjalo, ukuba sijonga ngakumbi, sinokubona ukuba indlela yokuthengisa umxholo ibikho ukusukela ngekhulu le-19. Ngaphezulu, incede ukuqhubeka kophuhliso lwamashishini ahlukeneyo.
Konke kwaqala ngasekupheleni kwenkulungwane ye-19. Inkqubela phambili kwezobuchwephesha kunxibelelwano nezothutho lolona tshintsho luphambili ekuhlaleni olwavumela iinkampani ukuba zakhe unxibelelwano olomeleleyo kunye nabathengi bazo. Umzekelo olungileyo wendlela oku kwenzeka ngayo ungathathwa kunyaka we-1885 xa Umsele inikezela ngolwazi neengcebiso kumafama ngendlela yokuphucula ishishini labo. Ngonyaka we-1912, yayisele iqokelele abafundi abangaphezu kwezigidi ezine.
Omnye umzekelo uvela kwinkampani yamatayara yaseFrance Michelin, Esiphuhlise isikhokelo samaphepha angama-400 esibonelela ngolwazi kubaqhubi ngokusekwe kwiingcebiso zokuhamba kunye nokugcinwa kwemoto.
Ulwazi olusuka kwimbali lutyhila oko umxholo wentengiso uhambe ngotshintsho olukhulu kwaye wabetha kwincopho yokuqala malunga ne-1920 xa kwasungulwa irediyo. Ukuthenga ixesha lomoya kunye nokuxhasa iinkqubo ezithandwayo kuyeyona ndlela ibalaseleyo yokukhuthaza nokwazisa. Isebenze ngokumangalisayo kubathengisi abathi bakhawuleze babone amandla abo ngelo xesha.
Umzekelo obalaseleyo wale meko ungathathwa kwinkampani Powder yesepha, eqale ukuxhasa umdlalo weqonga odumileyo. Abaphulaphuli bayo ekujoliswe kubo bachazwa ngokusondeleyo ukuba ngoomama, kwaye uphawu aluzange lube yimpumelelo kuphela - ukuthengisa kwalo kwanda. Oku kusete imigangatho emitsha kumdlalo wentengiso, kwaye ukusukela ngoko, izinto ziye zaphucuka kuphela.
Ukukhawulezisa phambili ukuza kuthi ga ngoku, kwaye abathengisi batshintshe ukugxila kwabo kulwabiwo lwedijithali lomxholo ngokunyuka kwekhompyuter, i-smartphone kunye ne-Intanethi.
Inye kuphela into engatshintshiyo, nangona:
Ukuthengisa umxholo kuhlala kuyenye yeendlela zokukhuthaza kunye nentengiso. Abathengisi baphuhlisa amaqhinga amatsha, umxholo omtsha, kunye neendlela ezintsha zokuzibandakanya nabaphulaphuli babo kunye nokubanika okungaphezulu koko bafuna. Imithombo yeendaba kwezentlalo kunye neewebhusayithi ziba yindawo ekujoliswe kuyo, kwaye ukusukela ukuba abantu bayo yonke iminyaka basebenzisa i-intanethi, akukho mda kwiliphi iqela elijolisa kulo ngokulandelayo.
Kucacile ukuba umxholo wentengiso wenze igalelo elibalulekileyo kwinkqubela phambili yezembali kumashishini aliqela. Into eseleyo ngoku kukuhlala phantsi ujonge ukuba kwenzeka ntoni ngoku kulomzi-mveliso uzizigidi zezigidi.
Siyathemba ukuba ufundile ulwazi oluncedo kweli nqaku onokulisebenzisa ngethemba lakho.
tags: iinyani zebhlogI-contnet enophawuulwabiwo lomxholo wentengisoImagazini yemiseleintengiso yemvelimanani
UJosh Wardini nguMnikeli woHlelo kunye noMphathi woLuntu e-Hostingtribunal. Ngemvelaphi yokuqala kunxibelelwano kunye nobuchule kuphuhliso loluntu, uJosh usebenza mihla le ekubumbeni kwakhona ulawulo lwabasebenzi beenkampani ezisekwe kwidijithali.
Inkcazo: Hlela iAudio usebenzisa iTranscript
Ngawaphi amazwe abhiyozela uLwesihlanu oMnyama?